Ngaba ndifuna Ukwazi ukuba ndibeka njani unxibelelwano kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 463
Amakhonkco kwi-Instagram abe yenye yezona ndlela zintengiso zokufumana abalandeli abaninzi, kwimeko ye-Instagram ibe yimpumelelo, kwaye baninzi abantu abaphuhlisa urhwebo kwisicelo sokufumana inani elikhulu labalandeli. Apha siza kukubonisa amaqhinga athile Ukwabelana ngamakhonkco ngeendlela ezahlukeneyo yiakhawunti yakho.
Ikhonkco lobume bomntu:
Ukufikelela kupapasho kwi-Instagram biographies kwicandelo le-biographies lelabo bonke abasebenzisi bale nto inethiwekhi yoluntu ngaphandle kocalulo.
Le yeyona ndlela ilula yokupapasha amakhonkco, ngokufikelela kubalandeli bayo nayiphi na iakhawunti, njengoko besesitshilo ngaphambili.
Kolu hlobo lopapasho, kungcono ukwenza amakhonkco angahlali ngokusisigxina inokugcinwa kumabali, ukuze xa umntu efuna ukufikelela kuyo, benze njalo ngaphandle kobunzima.
Okanye uyasilela yenza imenyu yeekhonkco zangaphambili, unokukhetha ukusebenzisa ikhonkco elahlukileyo elingafaniyo nexesha.
Phakathi kwezi ndlela zokungena kwikhonkco kukho iifomathi ezahlukeneyo, Unxibelelaniso, apho ubonakalisa khona abasebenzisi bakho Uluhlu lweekhonkco onokukhetha kuzo. Ngale nto, uyalela abalandeli bakho kwiindawo ofuna ukuba bafikelele kuzo, nokuba yivenkile okanye enye indlela oyisebenzisayo ukuthengisa iimveliso okanye iinkonzo ozikhuthazayo.
Olu khetho lukuvumela ukuba ukhethe kwiintlobo ezahlukeneyo zoyilo, imibala, iifomathi, ngaloo ndlela unike abalandeli bakho into eyahlukileyo eya kukwenza ugqame kukhuphiswano lwakho. Unokusebenzisa enye indlela ye- bonisa iifoto endaweni yokubhaliweyo.
Yabelana ngamakhonkco amafutshane kwizithuba zakho:
Amaxesha amaninzi xa sipapasha eludongeni, sibeka isihloko esithile okanye inkcazo emfutshane, yile nkcazo onokuyisebenzisa ukubeka ikhonkco emfutshane ubathumele kumaphepha okufika. Le yindlela ozisebenzisa kabini ezi nkcazo zeposi.
Imiyalelo ibaluleke kakhulu kwaye iluncedo Xa usenza ukuba umsebenzisi afumane into oyifunayo, kuya kufuneka uzame ukucaca kwaye ucacise kule nkalo yokupapashwa.
Sincoma ukuba wenze njalo Landela amakhonkco akho usebenzisa isixhobo se-UTM, Oku kuyakwenza ukuba wazi ngokuchanekileyo iziqwengana ezifumaneka kwikhonkco ngalinye ngexesha elithile. Ukuba unesicelo esipheleleyo njenge-Instagram ngale ndlela, kungcono ukusebenzisa izibonelelo ezikunikezelayo.
Okokugqibela, sicebisa ukuba usebenzise iSwipe Up, ezi zikunike ithuba lokuba ukwazi ukupapasha amakhonkco okwexeshana, eliza kukunika ithuba lokuthengisa ngokubhekisele kubathandi bakho, kuba zizidibanisi zethutyana abalandeli baya kujonga ngakumbi kwinto oyithumelayo kumabali akho kwaye yandisa amathuba otyelelo kwikhonkco lakho.
1 Ikhonkco lobume bomntu:
2 Imenyu yekhonkco:
3 Yabelana ngamakhonkco amafutshane kwizithuba zakho:
Uzihlaziya njani izaziso ze-Twitter?